အပြုံးကလေးနဲ့ပဲ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့တဲ့ ထက်အဉ္ဇလီ… -
အပြုံးကလေးနဲ့ပဲ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့တဲ့ ထက်အဉ္ဇလီ…
တေးသံရှင် စိုးလွင်လွင်ရဲ့ သီချင်းတွေကို ပြန်လည်သီဆိုတဲ့အပါတ်မှာ ပြိုင်ပွဲဝင် ထက်အဉ္ဇလီကတော့ နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာခဲ့ရပါတယ်။ မြန်မာအိုင်လ်ဒေါ ဝင်ပြိုင်ရင်း ဖခင်ဖြစ်သူနဲ့ ပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့တာကြောင့် ဝမ်းသာပျော်ရွှင်ခဲ့သူလေးလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သီချင်းဆိုတိုင်း ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ အမြဲတမ်းသီဆိုယှဉ်ပြိုင်တတ်ပြီး Performance ကောင်းကောင်းနဲ့ ဖျော်ဖြေတတ်သူတစ်ယောက်ပါ။ ထက်အဉ္ဇလီ တစ်ယောက် Goodbye Song ကိုလည်း ပရိသတ်ကြီးအတွက် အကောင်းဆုံး ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အနုပညာလမ်းကြောင်းမှာလည်း အကောင်းဆုံး ဆက်လက်လျှောက်လှမ်းပါစေထက်….
အပွုံးကလေးနဲ့ပဲ နှုတျဆကျထှကျခှာခဲ့တဲ့ ထကျအဉ်ဇလီ…
တေးသံရှငျ စိုးလှငျလှငျရဲ့ သီခငျြးတှကေို ပွနျလညျသီဆိုတဲ့အပါတျမှာ ပွိုငျပှဲဝငျ ထကျအဉ်ဇလီကတော့ နှုတျဆကျထှကျခှာခဲ့ရပါတယျ။ မွနျမာအိုငျလျဒေါ ဝငျပွိုငျရငျး ဖခငျဖွဈသူနဲ့ ပွနျလညျတှဆေုံ့ခဲ့တာကွောငျ့ ဝမျးသာပြျောရှငျခဲ့သူလေးလညျး ဖွဈပါတယျ။
သီခငျြးဆိုတိုငျး ပွုံးပွုံးလေးနဲ့ အမွဲတမျးသီဆိုယှဉျပွိုငျတတျပွီး Performance ကောငျးကောငျးနဲ့ ဖြျောဖွတေတျသူတဈယောကျပါ။ ထကျအဉ်ဇလီ တဈယောကျ Goodbye Song ကိုလညျး ပရိသတျကွီးအတှကျ အကောငျးဆုံး ဖြျောဖွတေငျဆကျခဲ့ပါတယျ။ အနုပညာလမျးကွောငျးမှာလညျး အကောငျးဆုံး ဆကျလကျလြှောကျလှမျးပါစထေကျ….
Total Users : 329507
Total views : 1087419